MITA IT Solutions
Max RAM Amount that Your Operating System Supports လုပ်တာတာကို site တစ်ခုမှ ကျွန်တော်တွေ့လို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများ နည်းပညာ တိုးတက်ပါစေဗျာ။
အောက်မှာ ဆက်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ see you every body.
Max RAM Amount that Your Operating System Supports
Operating System ::::::::::::: Amount of RAM
Windows 8 64 bit Enterprise, Professional :::::::::: 512 GB
Windows 8 64 bit :::::::::: 128 GB
Windows 8 32 bit ::::::::::4GB
Windows764 bit Ultimate, Enterprise & Professional :::::::::: 192 GB
Windows764 bit Home Premium :::::::::: 16 GB
Windows764 bit Home Basic :::::::::: 8 GB
Windows732 bit (all editions except Starter) ::::::::::4GB
Windows732 bit Starter ::::::::::2GB
Windows Vista 64 bit Ultimate, Enterprise & Business :::::::::: 128 GB
Windows Vista 64 bit Home Premium :::::::::: 16 GB
Windows Vista 64 bit Home Basic :::::::::: 8 GB
Windows Vista 32 bit (all editions except Starter) ::::::::::4GB
Windows732 bit Starter :::::::::: 1 GB
Windows XP 64 bit :::::::::: 128 GB
Windows XP 32 bit ::::::::::4GB
Mac OS X 64 bit :::::::::: 96 GB
Linux 64 bit :::::::::: 1 TB
Linux 32 bit ::::::::::4GB
Linux 32 bit (with PAE) :::::::::: 64 GB
So what's about your OS..
Labels: Ebooks Collection No comments:
Mozilla Firefox တွင် Video Download Helper Add-ons သုံးပြီး Video Download ရအောင်
ကျွန်တော် အသိအစ်ကိုတစ်ယောက်တောင်းထားတာကြာပြီ ကျွန်တော်လဲမအားတာနဲအခုမှတင်ဖြစ်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ IDM နဲ Download လုပ်လိုမရရင် ဒီ Add-ons လေးသုံးပေးရင်အဆင်ပြေတယ်။
Video Download Helper Add-ons ကနေ့ Link Copy လုပ်ပြီ IDM ကနေ Download လုပ်ပုံကို ပြထားပါတယ်။ အောက်မှ ပုံလေးတွေနဲ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ပထမ အနေနဲ Mozilla Firefox ထဲ့က Tools ထဲ့က Add-ons ကိုအရင်သွားလိုက်ပါ။ Shortcut အနေနဲ Alt + T နဲသွားလိုက်ရင်အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီမှာတော့ Download လုပ်နေတုန်းခဏစောင့်လိုက်ပါ။ လိုင်းမကောင်းရင်နောက်တစ်ခေါက် ပြန် ကြိုးစားလိုက်ဗျာ။
ဒီမှာတော့ Install လုပ်ပြီသွားရင် Restart now ကို လုပ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့စသုံးလိုရပါပြီ။
Downlod လုပ်ပုံ လေးပြထားပါတယ်။ အောက် က Pic (6),(7) မှာ Video Download Helper Add-ons ကနေ့ Link Copy လုပ်ပြီ IDM ကနေ Download လုပ်ပုံကို ပြထားပါတယ်။
ဒီမှာတော့ IDM မှာ Add URL မှာ ခုနက Copy link ကို Paste လုပ်ပြီ ok ဆို Downlod လုပ်နိုင်ပါပြီ။
အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ကြိုးစားလျက် (Myanmar IT Academy).We try together.
Labels: Useful Online Tools No comments:
Andriod ဖုန်းတွေမှာ System Maintaince လုပ်တဲ့ Dx Toolbox Latest Version လိုချင်သူများအတွက်
DxToolbox လေးကတော့ ကျွန်တော်တွေ့သမျှ Andriod System Maintaince APK ထဲ့ မှာသဘောအကျဆုံးပဲ။ Application တွေကို SD Card ကို Move တဲ့ Tool လေးကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ဖုန်းတွေလေးနေရင် DxToolbox လေးသုံးကြည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေသွားမယ့်။ Hwawei ဖုန်းတွေမှာပိုအဆင်ပြေတယ်။
အောက်မှာ Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Labels: Andriod Application, Android Collection, Mobile Collection No comments:
V Root ကတော့ ပြောစရာ သိတ်မလိုတော့ဘူးဗျာ။ Root Master ဆိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီ။ English Version လေးပါ။အောက် ကနေ Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Labels: Android Collection, Mobile Collection No comments:
Mobile Backup II APK လေးသုံးပြီး SMS တို့ Contacts တို့ Backup လုပ်ရအောင်
HandSet တွေကြောင်သွားလိုContacts တွေ ခဏခဏ ပျောက်တဲ့ အမျိုးတွေအတွက် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ APK install လုပ်ပြီရင် Online Register လုပ်ပေးဘိုလိုတယ်နော်။ကျွန်တော်စမ်းပြီးပြီးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။
WinRaR Compressed လိုချင်သူများအတွက် (Free Download)
WinRaR Software လေးကတော့ Computer သုံးသူများအနေနဲ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့
software လေးပါ။32 bit / 64 bit ကော လိုချင်သူများအတွက် Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
32 Bit - Download WinRAR 32-bit
64 Bit - Download WinRAR 64-bit
Labels: Compressed Software, Software Collection, System Software (For Windows) No comments:
Labels: Antivirus Update No comments:
Kaspersky Antivirus offline update ဆွဲချင်သူများအတွက်
Kaspersky Antivirus လေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာ။ IT သမားတိုင်းသိကြတယ်။ Offline Update Download လုပ်နိုင်အောင် Link ပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
AVG Antivirus Update လေးဆွဲချင်သူများ။AVG လေး လဲမိုက်တယ်ဗျာ။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Avira ကြိုက်သူများအတွက် Offline Update Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Other Link - Download Here
NOD 32 offline Update မလုပ်တတ်ရင်တော့ကျွန်တော် Video Training လေး link ပေးလိုက်တယ်။
Offline Update Download Here:
ဒီ antivirus လေးအကြောင်းတော့ သိတ် ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဗျာ၊ IT သမားတိုင်းလိုလို သုံးကျတယ်ဗျာ။ offline update 32 bit / 64 bit ကော ဆွဲချင်သူများ အတွက်။ Microsoft site ကို link ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Huawei ဖုန်းတွေအတွက် Google Play Application သွင်းကြရအောင်
Huawei ဖုန်းတွေမှာ တစ်ချို့ Model တွေမှာ Google Play application သုံးဘိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေတော့သုံးလိုရတယ်ဗျာ။မနက်ကကျွန်တော်ညီတစ်ယောက်စမ်းတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။Huawei ဖုန်းတွေမှာ Google Play မရှိသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Application သွင်းနည်းကတော့ကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီ။ Computer နဲ ဖုန်းနဲ Usb connect လုပ်ပြီ Unknown Source ရယ်၊Usb Debugging လေးကို on ပြီ။ ခုနက Download လုပ်ထားတဲ့ application လေးကို Run လုပ်ပါ။Root လုပ်တာလောက်တော့မခက်ပါဘူး။စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
V ROOT 1.6.0 လေးပါ။လွယ်လွယ်ကူကူ Root ချင်သူများအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခက်တာက Super User လိုတော့ English Fonts မဟုတ်တော့ Root လုပ်ပြီးသွားရင် Allow နှင့် Deny တို့ ကို Chinese Fonts နဲမေးတတ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတစ်ချက်တော့သတိထားလိုက်ပါ။ကျန်တာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ တကယ်ကို Root Master လေးပဲ။ မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။အောက် Link ကနေ Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Labels: Andriod Root Tools, Android Collection, Mobile Collection No comments:
ကျွန်တော်တို့Myanmar IT Academy ရဲ့ Group သို့ Join ပြီ။ နည်းပညာအကြောင်းများကိုအကူအညီတောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဆွေးနွေးချင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
။ ကိုယ်လေ့လာထားသော နည်းပညာများကိုလဲ ၀င်ရောက် share နိုင်ပါသည်။နည်းပညာနှင့်မဆိုင်သော Post များ ကို မတင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။။ မိတ်ဆွေများအားလုံးအား နွေထွေးစွာကြိုဆိုလျက်။
We try together for our country.
ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေက Linux OS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Installation Tutorial တွေ ကျွန်တော်တို့ Youtube Page မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခ...
2017 မဟာသင်္ကြန် မှာ Microsoft Server 2012 Collection Video Tutorial တွေလေ့လာကြရအောင်
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ Microsoft Server 2012 Video Tutorial တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Server 2012 GUI /Core OS Installation တွေကလွဲရင်...
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ CompTIA ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် Youtube က Tutorial Page ကောင်းတာလေတစ်ခုတွေ့လိုလှမ်းညွန့်လိုက်ပါတယ်။ P...
Andriod Application (18)
Andriod Root Tools (2)
Android Collection (24)
Anniversary Photo Collection (2)
Antivirus Update (6)
Cisco Ebook Collection (2)
Compressed Software (1)
Computer Basic Ebooks (1)
Download Guide (1)
Ebooks Collection (14)
Hardware EBooks Collection (3)
Linux Eook Collection (1)
Mac OS Video Tutorial (2)
Microsoft Server Ebook Collection (1)
MITA APK file (for Andriod Moible) (1)
MITA Ebooks (3)
MITA News (10)
Mobile Collection (16)
Myanmar Fonts (3)
Networking EBook Collection (3)
One Year Photos (MITA) (1)
Software Collection (9)
System Software (For Windows) (7)
Troubleshoot Software (3)
Video Training (47)
Video Training Collection (47)
Virtual Software (1)